Samachar Batika || News from Nepal » नेकपाको सचिवालयमै अध्यादेश ढि’समिस ! माधव– प्रचण्डसँगको र’हस्यमय छलफल
नेकपाको सचिवालयमै अध्यादेश ढि’समिस ! माधव– प्रचण्डसँगको र’हस्यमय छलफल
चमक होस् पनि कसरी ? केही घण्टाअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेट बैठकमा प्रस्तुत गरेका बेमौसमका दुई अध्यादेशले पार्टीभित्र त’रंग ल्याएको थियो । र, त्यही त’रंगका कारण प्रचण्डले केपी ओलीलाई टेलिफोन गरेपछि अकस्मात सचिवालय बैठक डाकिएको थियो ।
कोरोनाको म’हामारीवि’रुद्ध राष्ट्रिय एकताको खाँचो परिरहेका बेला पार्टी फु’टाउन सजिलो पार्ने अध्यादेश पारित गरेर शीतलनिवास पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकमा उभिएका थिए ।
आ’कस्मिक बैठकमा सचिवालयका नेताहरु केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेलको उपस्थिति थियो ।
सचिवालय बैठकको भि’त्री कथा अझै बाहिर आइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको आत्मघाती अध्यादेशबारे बैठकमा कुन नेताले के–के भने ? यो विषय नेकपाका आम कार्यकर्ताका लागि अहिलेसम्म र’हस्यको विषय बनिरहेको छ ।
केही घण्टाअघि क्याबिनेटले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश केही मन्त्रीहरुको असहमतिका बावजुद पारित गरेको थियो । क्याबिनेटमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले अध्यादेशको वि’रोध गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सकिएपछि उ’र्जामन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयमा फर्केर केही मन्त्रीसँग बेग्लै छलफल गरे । त्यसपछि उनी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगे ।
त्यतिबेलासम्म सरकारले ल्याएको अध्यादेशवि’रुद्ध सामाजिक सञ्जाल गर्माइसकेको थियो । देशभरिका नेकपा कार्यकर्ता तरंगित बनेका थिए । विपक्षी दलहरुले सरकारवि’रुद्ध आ’क्रोश पोख्न थालिसकेका थिए । कोरोनाको बहसमा होमिएका आम मानिसको ध्यान अध्यादेशतिर सोझिएको थियो । नेकपा फु’ट्न पो लागेको हो कि भन्ने प्रश्न सर्वत्र फैलिइसकेको थियो ।
यहीवीच सचिवालयका नेताहरुले टेलिफोन सम्वाद गरे । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरे । र, सोमबार साँझ नै सचिवालयको आ’कस्मिक बैठक बस्ने टुंगो भयो । नौ भाइ नेताहरु हतार–हतार बालुवाटारमा जुटे ।
नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परिसकेका थिए । तर, सोमबार साँझको बैठकमा भने प्रधानमन्त्री ओली एकाएक ‘अफेन्सिभ’ बने भने उनका आ’लोचकहरु चाहिँ ‘रक्षात्मक’ बने फर्किए ।
बेमौसमी अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्न बसेको आ’कस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको क’डा आ’लोचना गर्ने नेताहरु दुईजना मात्रै भए । हल्का आ’लोचना गरे पनि उदाररुपमा प्रस्तुत हुने नेताहरु दुईजना देखिए भने प्रधानमन्त्रीलाई दृढ समर्थन जनाउनेहरु केपी ओलीबाहेक तीनजना देखिए ।
अध्यादेशको क’डा वि’रोध नगर्ने तर पार्टीभित्र छलफल हुनुपथ्र्योसम्म भन्नेहरुको बहुमत देखियो । सचिवालयको यस्तो परिदृश्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाको सचिवालयबाट अब चु’नौती रहेन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको पूर्वएमाले निकट एक सचिवालय सदस्यको दाबी छ ।
आइतबार माधव नेपालसँग र शनिबार प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीले घण्टौंसम्म कुरा गरेका थिए । अँध्यारो कोठामा गरिएका ती गु’प्त छलफलहरुमा के–के कुरा भएका थिए ? अहिलेसम्म प्रचण्ड र माधव नेपालले सूचना लुकाइरहेका छन् ।
संविधानसँग बाझिएको कानूनलाई सच्याउन र लोकतान्त्रिक ढोका खोल्नका लागि दलसम्बन्धी ऐ’नमा संशोधन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा बताएका थिए । आफ्नो निर्णय आम जनमानसमा कति अलोपप्रिय छ र कति वि’रोध भइरहेको भ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले मतलब गरेजस्तो देखिँदैनथ्यो ।
आफ्नो पार्टीमा अहिले यो अध्यादेशको आवश्यकता नभए पनि कतिपय पार्टीहरुलाई वि’द्रोह गरेर भिन्नै पार्टी बनाउँछु भन्दाखेरि थुनेर राख्नु लोकतन्त्रवि’रोधी हुने भएकाले पार्टी वि’भाजनको बाटो खोलिदिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा दृढरुपमा समर्थन जनाउनेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल थिए । बादलले इतिहासको का’लखण्डमा नेतृत्वले अलोकप्रिय नै भएता पनि सहासिक निर्णयहरु लिन सक्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहासिक निर्णय लिएको बैठकमा बताएका थिए । यो अध्यादेशलाई बादलले अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि सचिवालय बैठकमा खासै क’डा रुपमा प्रस्तुत भएनन् । अध्यादेश ल्याउनै पर्ने भए पार्टीमा सल्लाह गर्नुपर्ने थियो भन्दै नेता नेपालले यसलाई ‘बाहिर राम्रो मानेका छैनन्’ भने । नेता नेपालले अध्यादेश फिर्ता नै हुनुपर्छ वा यसको औचित्य छैन भनेनन् । ल्याउनैपर्ने भए सल्लाह गरेर ल्याउनुपथ्र्यो भन्दै आफूलाई उदाररुपमै प्रस्तुत गरे ।
अरुबेला बैठकमा क’डारुपमा प्रस्तुत हुने वामदेव गौतमले पनि सोमबार साँझको बैठकमा अहिले नै अध्यादेश ल्याउन जरुरी थिएन सम्म भने पनि सरकारले अध्यादेश फिर्ता नै गर्नुपर्छ भनेनन् ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चाहिँ अध्यादेशको कन्टेनमा प्रवेश नै गर्न चाहेनन् र यो ग’म्भीर भूल भएको बताए । अर्का सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि झलनाथ खनालकै लाइनमा बोले ।
सचिवालय बैठकले सरकारबाट ल्याइएको अध्यादेशलाई खासै ग’म्भीर रुपमा लिएको देखिएन । प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्नुपथ्र्यो, अबदेखि सल्लाह गरियोस् भन्दै यसलाई समान्यीकरण गरेर बैठक टुं’गिएको नेताहरुको संश्लेषण छ ।
बैठकमा कुराकानी भइरहेकै बेला राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको सूचना आयो । अब राष्ट्रपतिबाटै जारी भइसकेपछि खेलै खत्तम भयो भन्दै यो प्र’करणलाई ढिसमिस बनाएर नेताहरु बैठकबाट उठेको स्रोत बताउँछन् ।
नेकपाका उच्च तहका नेताहरुका अनुसार सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले अब नेकपाभित्र तत्कालै कुनै उथल–पुथल हुने स्थिति लभगन टरेको छ । सचिवालयले नै अध्यादेश प्रकरणलाई ढिसमिस गरिसकेका कारण अब यो विषय च’र्कने, स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग हुने इत्यादि सम्भावना अब रहेन ।
अध्यादेशको वि’रोध गर्ने नेताहरुले पनि यसलाई सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ नभनेको हुँदा अब प्रधानमन्त्री ओलीको बेलगाम यात्रामा नेकपाको सचिवालय अ’वरोधक बन्ने स्थिति लगभग सकिएको छ ।
माधव– प्रचण्डसँगको र’हस्यमय छलफल
प्रधानमन्त्री ओलीसँग गो’प्य छलफल गर्नु अनि सोमबार साँझ भएको सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड–माधव दुबैजनाले अध्यादेश फिर्ताको माग नगर्नुले कतै शीर्षतहमै यसबारे मिलेमतो त छैन ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जाएको छ ।
प्रकाशित मिति १० बैशाख २०७७, बुधबार ०२:३४